Yokutanga Malta Yemamiriro ekunze Shamwari Kufamba Funga Tank inopedzisa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Yokutanga Malta Yemamiriro ekunze Shamwari Kufamba Funga Tank inopedzisa
Kuputsa Kufamba Nhau • Malta Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kufamba Funga Tank vatori vechikamu uye Gurukota
Mangwanani ano muQawra, Malta, Hon. Julia Farrugia Portelli akataura nenhengo dze SUNx Malta Mamiriro ekunze Yehukama Kufamba Funga Tank paHurumende yekuzvipira kweMalta kuzvimisikidza pachayo senzvimbo yeClimate Friendly Travel.
Chinhu chakakosha kutora kubva kumusangano uyu ndechekuti iyoEXistential Climate Crisis inoda kutonyanya kuita chiito nechimbi chimbi chepasi rose cheKufamba neKushanya chikamu kupfuura zvave zvichizivikanwa kusvika nhasi.
Hurumende yeMalta, mune yayo basa semubatsiri uye mudiwa, yakazvipira kuve yepasi rose Center yeClimate Friendly Travel. Gurukota reMalta Yezvekushanya uye Kudzivirirwa Kwevatengi, Hon. Julia Farrugia Portelli, anga aripo kupedzisa musangano uye kukurukura zvakawanikwa muTank Tank.
Iye Hon. Gurukota rezveKushanya, Julia Farrugia Portelli akataura kuti nyika yedu haisi kungoita senhengo yenyika dzepasi rose mukutungamira kuyedza kwepasi rose, asi iri kuisa pamberi chikamu chezvekushanya cheMalta mukugadzirisa Shanduko Yemamiriro ekunze nekusimudzira Climate Friendly Travel kuburikidza nekudzikisa mweya iyo yekupedzisira chinangwa chekusarerekera kabhoni. Gurukota rakawedzera kuti Malta ine tsika yakasimba yekutungamira zvirongwa zvekukosha kwenzvimbo dzakadai senzira yakaitwa pa1967 United Nations General Assembly iyo yakazoguma kugamuchirwa kwe1982 United Nations Convention pamusoro peMutemo weGungwa uye chiito cheMalta kuUnited. Nations General Assembly muna Zvita 1988 yakakurudzira chisarudzo cheUN pamusoro pekukasira kwekuchengetedza mamiriro ekunze mukufarira kwevanhu nekuichengetedza kubva kushanduko dzakaipa dzakaitwa nevanhu uye nekuziva shanduko yemamiriro ekunze se "chinhu chakajairika" chinoda "chiito chakakodzera".
SUNx Malta yakagadzwa kuburikidza nerutsigiro kubva ku Ministry for Tourism & Consumer Kudzivirira, uye Malta Tourism Chiremera (MTA). Muvhuro 24th Kukadzi vakaita musangano wekutanga weClimate Friendly Travel Funga Tank, iyo yakaunganidza vatungamiriri vanofunga makumi matatu nemakumi matatu, nerutsigiro kubva kuQatar Airways, kubva kumatunhu ese ezvidzidzo, maindasitiri, nehurumende kuti vataurire nyaya dzakakosha paKusanduka kweMamiriro ekunze maererano neKufamba neKushanya. Chinangwa chaive chekudzokorora uye kugadzirisa chekutanga Mamiriro ekunze Yehukama Kufamba 2050 Chido Chinyorwa iyo yakaburitswa padivi-mitsara yeUN General Assembly muNew York munaGunyana 2019.
Iyo Think Tank yakatevera hwaro hwepakati hweClimate Yehukama Kufamba: Kuyerwa Kugadzirisa; Green kuti ikure; 2050-chiratidzo cheInnovate. Leslie Vella, Mutevedzeri CEO weMTA, uye Sachigaro weSUNx Malta, yakavhura chiitiko ichi nepfupiso yekuti sei Malta yakasarudza kuzviita iyo nzvimbo yeClimate Friendly Travel pakatarisana nehuremu hwekumanikidza huripo hweClimate Change paUN Agenda kutanga muna 1987.
Iwo makiyi ekudaidzira kuita chiito kubva kuFunga Tank aive:
Dambudziko reMamiriro ekunze iri eXistential. Vese vanobatika vanosanganisira Yekufambisa, Yekugamuchira Vaeni, Yekufambisa masevhisi, uye Vanopa Zvivakwa vanofanira kukurumidza kutanga shanduko muna 2020 kuti vapinde muParis 1.5o trajectory mukati memakore anotevera 7- 10 makore. Hurumende, Makambani, nharaunda nevatengi, vanofanirwa kuita zvese kutora matanho izvozvi.
"Kufamba Kwehukama Kwehukama". Pasi pechiratidziro cheClimate Friendly Travel, iyo indasitiri inofanirwa kutora izvi sechinhu chakakosha uye chitsva.
Kuchinja zvizere nzira dzese dzekutakura yakaonekwa seyakakosha. ZUVAx Kufona kweMalta kweMwedzi-kupfura nzira yekufamba nendege kuti ikurumidze kutsvagisa tekinoroji uye kuendesa kwakatsigirwa kwakasimba, izvo zvinofanirwa kusanganisira kugoverwa nekukurumidza uye nekukurumidza kukwidziridzwa kwemhinduro dziripo pari zvino kuti dzikise zvakanyanya kuvhurwa kwemafosili peturu kuvimba.
Mari Yemamiriro ekunze. Ichitaura nezveGreen New Deal semuenzaniso, iyo Yekufamba & Yekushanya chikamu chinofanira kuita zvakanyanya kushingairira nezviri kubuda zvirongwa zveGreen Finance kuti vakwanise kuwana mari yakakwana yeshanduko. Yakakwira mhando kudzimisirwa kwemabhoni zvinoonekwa semidziyo yenguva pfupi yekushandura asi isina kukwana zvachose semhinduro yenguva refu. Muchirevo chechinyorwa ichi zvaitendwa zvakawandisa kuti chiito chekufamba nendege kusvika parinhasi chiri kuwira kumashure kwekukurumidza kuwedzera shanduko inoda.
Ari kubuda matsva uye matekinoroji. Kuvaka kugadziridza, kufamba kwechikepe, kudzikiswa kwekabhoni, marara kune shanduko yemafuta, kuvandudza maitiro evatengi nemikana yedhijitari.
Zuvax Malta Mamiriro ekunze Anoshamwaridzana Kufamba Registry yeChido yakaongororwa uye yakasimbiswa, sezvakange kuri danho neWISeKey yekuvandudza mutengi mutsva anotarisana nepuratifomu yakachengeteka.
Dzidzo Yechizvarwa Chinotevera yakasimudzirwa sechinhu chakakosha pekutanga nekusimbiswa kuAdvanced Diploma, kubva kuGozo Institute of Tourism Studies Campus. Zuvax Malta 100,000 YAKASIMBA Yemamiriro ekunze Shamwari Yekufamba Makwikwi uye pamwe nechirongwa chechikoro chayo inhanho yakanaka kwazvo yekusimudzira shanduko yekambani nenzvimbo. Pamusoro pezvo, kunatsiridza hwaro hwekutsvagisa kwakasimbiswa pane ese decarbonization uye kusimba kwechikamu.
Muzvinafundo Geoffrey Lipman, Mutungamiri SUNx Malta uye Mutungamiri we International Mubatanidzwa weVashanyi Partner (ICTP), yakati: “Tinofanira kuita izvozvi uye tinofanira kukurumidza. Tiri kutoona pamwe nehurongwa hwekudyidzana kweMalta huri pakati peHurumende neTravel & Tourism Supply Chain, kuti nzira yekupayona inogona kuita izvi. "Inogona kudzokororwa pasirese, sezvo Nyika dzichitsvaga kuzadzikisa Chibvumirano cheParis Nyika Yakatemerwa Mipiro."
Akawedzera, "Tinofara kuti Malta yatora chinzvimbo chekutungamira mukugadzirisa njodzi iripo yekushanduka kwemamiriro ekunze nekugadzira hwaro hwerutsigiro rweTravel & Tourism iyo inogona kubatsira makambani nenharaunda mushanduko inodiwa."
Iyo Kufamba Funga Tank yakapedzisa nesangano reKuta-Horo rinotungamirwa naGurukota Portelli, nehurukuro yekuzvipira kweMalta kukukosha kwekugadzirisa Shanduko Yemamiriro ekunze nekugadzira muenzaniso weKunze Kwehukama Kufamba.